Madaxweynaha Puntland oo odayaasha dhaqanka gobolka Bari kulan kula yeeshay magaalada Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo odayaasha dhaqanka gobolka Bari kulan kula yeeshay magaalada Boosaaso
March 5, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland oo odayaasha dhaqanka gobolka Bari kulan kula yeeshay magaalada Boosaaso. [Xigashada Sawirka: xafiiska warfaafinta madaxtooyada]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Aaxd ah kulan la qaatay odayaasha dhaqanka gobolka Bari.
Kulanka ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada magaalada Boosaaso ee magaalo ganacsiyeedka Puntland.
Sida ilo-wareedyo ku dhow odayaasha ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror, kulanka ayaa looga hadlay xaalada nabadgalyo iyo horumarka magaalada Boosaaso iyo dhammaan gobolka Bari oo dhan.
Ilo-wareedyada ayaa xaqiijiyay in odayaasha dhaqanka iyo madaxweynuhu ay isku afgarteen sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha ay kamidyihiin ammaanka gobolka.
Intii lagu guda jiray bilihii dhawaa ee lasoo dhaafay, magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa goobjoog u noqotay mowjado weeraro ah oo lagu bartilmaameedsaday saraakiisha dowladda, waxaana masuuliyadooda sheegtay ururada xagjiriinta ah sida Al-Shabaab iyo ISIS.
August 20, 2017 Madaxweynaha dowladda Puntland oo u jeediyay beelaha ku diriraya magaalada Buuhoodle in ay joojiyaan colaada
November 11, 2016 Madaxweynaha dowladda Puntland oo kulan la qaatay waxgaradka gobolka Mudug
Wariye Axmed Kismaayo oo ku geeriyooday Hindiya
Garoowe-(Puntland Mirror) Weriyihii weynaa Axmed Maxamed Cali sidoo kale loo yaqaan (Axmed Kismaayo) ayaa ku geeriyooday isbitaal kuyaala magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya, waxaa laga daweeyay xanuun cunaha ka hayay, sida ay qoyskiisu u xaqiijiyeen [...]